i-orenji enesiqingatha - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAndre
I-Meia Laranja yindawo eyamkelekileyo, eyenzelwe ukubonelela ngokuhlala okumnandi kwabo bafuna ukutyelela i-Almeirim kwaye bafumane i-Sopa da Pedra yendabuko, i-Caralhotas okanye ii-wineries ezintle eziyinxalenye yeNdlela yeWayini.
I MEIA Laranja yi isithuba esamkela adalelwe ukubonelela ukuhlala ezinqwenelekayo abo bafuna ukutyelela Almeirim uze ukwazi Stone isuphu yemveli, i "Caralhotas" okanye iiwayini ezintle eziyinxalenye umdla Wine Route.
U-Meia Laranja wayeyiziko lomsebenzi wentlalontle yemisebenzi ... Apha abantu baphumla, babe neengxoxo, benza yonke imisebenzi ehambelana ne-conviviality efunwa ngumsebenzi kwintsimi.
... yayiliholo elibekekileyo lamasimi, lazalisekisa umsebenzi ombini wevenkile ebambekayo kunye negumbi lokuhlala nelokutyela, ukulala kancinane phantsi komthi wokubonelela nokufumana ukuhlaziyeka kwamasebe kunye nempepho ebhudlayo eyayidlula phakathi komthi. amasebe kwaye washukumisa amagqabi.
... eyona nto intle kuwo omabini amazwe!
Isiqingatha se-Orange, yayiyiziko lentlalontle yemisebenzi ... apho abantu babenokuphumla kwaye baxoxe, yilapho zonke izenzo, ezihambelana noluntu ukuba umsebenzi welizwe lasemaphandleni, unokuzaliseka.
Yayiyiholo enkulu yasemaphandleni, yayinomsebenzi ophindwe kabini wendawo yokugcina impahla ephuculweyo, igumbi lokutyelela, inkontini kunye negumbi lokuphumla phantsi komthi wokubonelela ukufumana ukuhlaziyeka kwamasebe kunye nomoya opholileyo odlula emasebeni ushukumisa amagqabi.
... awona mazwe mabini!
IMeia Laranja ikwiRibatejo, kumbindi wesixeko saseSopa da Pedra-Almeirim. IJardim da República, apho iTerreiro do Paço Real yayidla ngokuhlala khona, izinyuko nje ezimbalwa ukusuka eMeia Laranja. Kanye ecaleni kwayo kumi iCine-Teatro kunye neMarike kaMasipala. Ukuhamba umgama omde, kunokwenzeka ukuba ujonge isakhiwo seZikolo eziDala kunye ne-Igreja Matriz de São João Baptista.
Ukuqhubela phambili nokhenketho, unokuzihlaziya kwizithunzi zemithi enqabileyo yeParque da Zona Norte. Apha ungenza umthambo, ubukele imidlalo yePetanque yesintu okanye usele isiselo esipholileyo kwikhefi yale park ngelixa usonwabele amachibi akufutshane namachibi okuQubha kaMasipala.
Ukushiya iParque da Zona Norte, tyelela iThala leeNcwadi likaMasipala kwaye ulahlekelwe kwizitrato zamatye eziqhelekileyo kwisixeko sase-Almeirim. Dlula kwi-Fonte dos Namorados endala, iPlaza de Toros de Almeirim kwaye ungcamle iSopa da Pedra ethuthuzelayo ekhatshwa yiCaralhota kwaye uhlanjwe ngeglasi elungileyo yewayini evela kwingingqi.
Ukongeza kwiSopa da Pedra yesiko, iAlmeirim yaziwa nangewayini zayo. Uhambo oluya eQuinta da Alorna (2km), Casa Cadaval, Quinta do Casal Branco okanye eFiúza&Bright kufuneka kwakhona kube yinxalenye yohambo lwakho.
Isiqingatha seOrenji sibekwe eRibatejo, kumbindi wesixeko seStone Soup-Almeirim. Umyezo weRiphabhlikhi, apho iTerreiro do Paço Real yayimi ngaphambili kukuhamba nje okomzuzwana ukusuka eMeia Laranja. Amanye amanyathelo ukuya phambili uya kufumana iCinema/Ithiyetha kunye neMarike yeNdawo. Ngokubhekele phaya ungazonwabela izakhiwo zeSikolo esiDala kunye neCawa kaMama yaseSt.
Kumgama wokuhamba umthunzi phantsi kwemithi yoMmandla wePaki ulindele ukukupholisa. Apha, ungazibandakanya kumdlalo wokuzilolonga, ubukele imidlalo yePetanque yesintu okanye ube nesiselo esipholileyo kwicafe yepaki ngelixa ukonwabela umbono wechibi kufutshane namaPool aseKhaya.
Ukuhamba phambili ukusuka kwiPaki yoMmandla, tyelela iThala leeNcwadi likaMasipala kwaye ulahleke kwizitrato zamatye ezihonjisiweyo zesixeko saseAlmeirim. Dlula kuMthombo wakudala weValentine, kwi-bullring ye-Almeirim kwaye ungcamle iSoup yeLitye ethuthuzelayo ehamba neCaralhota kunye neglasi engaphelelwa lixesha yewayini ngoncedo lwalo mmandla.
Gcina ukhumbula ukuba Ukongeza kwiSophu yesiNtu yeStone, iAlmeirim yaziwa nangewayini zayo.
Uhambo oluya eQuinta da Alorna (2km), Casa Cadaval, Quinta do Casal Branco okanye Fiúza & Bright kufuneka kwakhona kube yinxalenye yohambo lwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Andre
Inombolo yomthetho: 82394/AL
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Almeirim